Rado mpanoratra: Ny zavatra hafa mety mbola tsy fantatrao.
2008-09-18 @ 13:55 in Kolontsaina
Mbola eo ampanongotsongoana faramparany ilay andrarezin'ny teny sy ny haisoratra malagasy lavo
isika amin'izao fotoana izao. Mbola mahatsiahy tsara sy mampitamberina ny soa sy ny ezaka vitany
izay rehetra mahatsapa fa nisy vongana masirasira (leviora) avy tamin'i Rado namolavola ny nankamamiany ny haisoratra lovan-kolontsaina malagasy na farafaharatsiny ny teny malagasy, dia izay ihany, tahaka ahy izay manoratra aminao etoana na dia tsy nisy aza fifaneraserana mivantana aminy. Tsy tena mpankafy ny asa-sorany aho, eo amin'ny lafiny fitadidiana tsianjery izay nosoratany, fa mahatsapa kosa ny halalin'ny zavatra soratany rehefa mahafantatra zavatra bebe koa momba azy. Hoy Simeon Rajaona fony nanatrika ny fanamarihana ny faha-80 taonan'i Rado notontosaina tao amin'ny fiangonana tranovato Faravohitra tamin'ny taona 2003 ary atao tamberina saky ny vita vaovao alina ao amin'ny TVM amin'izao fotoana izao:
Anisan'ny alahelo entiko mandramaty mihitsy ny tsy mba nampidirako tao anaty "takelaka notsongaina voalohany sy faharoa" ny asasoratry Rado na dia iray aza satria tsy hisy intsony ny fampidirana lahatsoratra vaovao. Nanomboka tamin'ny taona 1955 manko ny fanangonana ny lahatsoratra rehetra nefa dia tsy nahafantatra an'i Rado sy ny asa sorany mihitsy aho. (Teo anatrehan'i Rado sy ny mpanatrika rehetra no nitenenany izany ho karazana fifonana eo anatrehan'i Rado).
Nataoko ho karazana zavadehibe nampitodika ahy hijery fahitalavitra indray ny manaraka fandaharana manokana momba an'i Rado, hany ka tsy nampaninona ahy velively na tratra aoriana aza ao nalefa nivantana (teny antenatenan'ny lalao vao nalefa mivantana) ny lalao baolina fandaka ifanandrinan'ny Manchester United sy Villareal. Izaho mpankafy baolina fandaka lozantany ity no tsy nisy alahelo na fahatezerana akory noho ny tsy fahitana mivantana lalaon'ny goavana sahala min'izany? Na izaho aza gaga tamin'ny tenako.
Ataoko fa tsy manavahiny ny mpamaky ny asa-soratry Rado ny fampahatsiahivana nataon'i Zo-Maminirina an-tonokalo ny sombin-teny manamarika ny soratr'ity Ngezalahin'ny literatiora Malagasy ity:
Ho any ianao kanefa
ny lalana mankany tsy misy dia miverina
lalan-tsy mif(am)etra hatreo am-parafara fara-fatoriana
ka mampifararemotra ny manam-pofonaina
Dia lasa ianao...
kanefa ny dian-drantsanao natosiky ny SEDRAn'
ny fizarana mamy
ny DINITRy ny tolona
niady ho an'ny ZO
sy ny maro hafa
no ANDO hampamololona
indray ilay finoana
noheveriko ho tarangana.
Mbola indreo mitsangana
mbola sahy mitady
ny tena fahafahana
Etsy kely aloha...
iriko ho tsikitsiky no ifandaozantsika
na fo mangorangorana
sy mangorangorana aza ny ato anatiko ato.
Aza misahirana, azafady indrindra f'aleo hakatoko ihany
io varavarana io...
...dia hitomany aho.
Zo-Maminirina 16 septambra 2008
Tononkalo avy tamina mpankasitraka ny asa sorany izany fa nampisaina lalina nahafantarana zavatra hafa momba ny tenany ihany koa ilay tononkalo nosoratan'Andriamanantena Celestin (efa nodimandry ihany koa) ho an'ny zandriny tamin'ny andro nitsingerenan'ny faha-70 taona nahaterahany, ny zoma 1993, ary hita tao amin'ny gazety taratra n°1386 nivoaka ny Alarobia 17 septambra 2008 pejy fahaefatra:
Faly aho, ry zandry, ka ho tsiny ve
ny mitanisa fohy ny araben'ise?
...Ny arabe iray dia lalam-pitsapana,
feno vatokely sy hady mangotana.
Vao sivy taona ise dia maty i Mamantsika,
fotoana kely monja ilay volana baliaka
dia lasa tsy nipody. Ny fitiavan-dreny,
minitra dia nandalo; ny iray tampo indreny
nandeha tsikelikely, namela antsika lahy
izay tendrony ankiroa matoa sy faralahy.
Tapaka ny tady, banga ny elanelana
nefa mba niriana ny vony ampy felana!...
...Fa nitohy ihany ny tsilo an-dalambe:
Fotoana maromaro no tsy salama ise;
nanao tampody fohy ny antsy fandidiana
ka niverimberina nitondra hakiviana.
Alin-tsy voaisa no nisehoan'izany,
na teto anivonay, na tany ampita tany.
Nivesatra ahiahy ny zanaka sy vady,
ny havana rehetra lalovan-dazon'ady.
Ho resy ihany va 'ty loza izay misakana,
sa anio mihitsy no ho rendrika ny lakana?
...Fa nitohy ihany ny tsilo teny an-dalana,
naranitra ny antsy ka nahatratra akalana.
Ny fitiavan-janaka nataon'ise filamatra,
indraindray nikiky sady koa nandramatra
ny alina sy ny andro nandalo tamin'ise,
nitera-panahina sy ny teny toyny hoe:
"Hanao ahoana re ny hoavin'ny taranako,
fa tiako, tena tiako ary mamiko ny zanako?"
...Fa mbola niha-maizina ny arabe nizorana,
ny lohalika osaosa vao mainka koa nangorana;
ny volo efa fotsy mba niandry taona zina
nolalovan'afo ka mainka niha-kina.
Tsy ela fa vao omaly, sombinaina efatra
no niara-maty teto. Alina mavesatra
ny alina rehetra fa lasa ny malala,
natelina ny sento ka mila ho vakivaky
ny loha adaladala!...
Ireny no antsoiko hoe arabe iray,
nisy fitsapana sy ady mahamay,
nodiavin-tongotra sy taolana mihanjaka,
ary nandrefesana ny hery sy ny tanjaka!...
...Fa misy ny arabe izay hafa noho izany,
mivoly voninkazo sy kalokalo mamy,
dia ny arabe sy soratra nitondran'ise
ny hetaheta maro nanindry ny mpandeha!
Mpamaky firy moa no sempotra sy toro,
mpamaky firy moa no sendra horohoro,
no rehefa mahavaky ny tonokalo mamy,
no tsy toy ny olonanandresy ny tomany,
ka nahazo hery sy sitrana tsy miody:
"DINITRA" sy "ZO" nanjary fanafody?
Ary raha nanjaka ny olom-panjanahana,
ka nanjavozavo ny tanjona hiatorahana,
ise no nitaiza sy nampahazo vahana,
nampianatra ny ankizy hiantso Fahafahana!...
Mihoatra noho izany ny araben'ny Hira
namonjen'ise ny fo voaviravira,
Nahatonga ny olona hiandrandra lanitra,
Hiantso sy hidera ny anaran'Andriamanitra!
Fa na aiza fiangonana, na aiza fivoriana,
Na tilikambo avo na tilikambo iva,
njao mamelovelo raha tonga ny hariva
Ny hiran'ise, mandona ny ati-fo,
Ka vetivety monja, miharina ny loha!
Arabe'ny hira, araben'ise,
Ka babo izay mandalo, babo izay mandre!...
...Tsy adino koa ny Làlanan'ny kabary,
Nanehoan'ise fa soa miharihary
Ny tenin-drazantsika. Teny manankasina,
Afa-mampikambana sy mampifankatia
Zatovo marobe, ka falifaly ery
Ireo izay mandre ny ohabolana, hainteny
Milaza ny fitia, manombo izay nekeny.
Moa tsy faly ery raha mifanena ise
Amin'ny zatovo ka ilazana hoe:
"Moa tadidinao, fa ianao ange no iray
Nitondra ny kabary tamin'ny andronay?...
...Fa ato an-tsaiko koa ny araben'ny kanto,
Ny araben'ny sary tsara sy milanto,
Fomba nanehoana ny tsy takatry ny penina,
Nanalana sarona ny nofy izay nafenina.
Hain'ise izany ka fomba tsy fahita
Nateraky ny karoka no tonga zava-bita.
Na tsihy nasiana sary, na hazo iray nodorana,
Na jiafotsy tsotra, na hoditra nohosorana.
Ireny no akora sy zary fiasana,
nasain'ise niteny ka tonga nigagana.
Dia jejojejo ary ny rindrina miravaka,
Ny sary vitan-dRado tamim-pomba miavaka...
...Fa anampiako izany ny araben'ny hehy,
Ny vazivazy maro nanondraka tarehy.
hain'ise manokana ny nampiasa izany,
Na andro maha-ory na andron'ny tomany.
Vazivazy ireny nefa nanafana
Fa na ny tolona aza ho an'ny firenena,
Ny vazivazy ihany no fomba nanefena,
Nanefen'ise ireo ratsy tarigetra,
Hanaiky tsongotsongo sy hanova toetra!...
3 - 10 - 1993 Amboditsiry
Hay ve izany Rado izany ka toa fijaliana hatrany ny fiainany rehetra. Hatramin'ny fahazazany
nandaozan'ny reny sy ny iray tampo azy telo mianaka ka hatramin'ny andro nahafatesany saingy tsy nataony hampiondrika azy izany fa nitraka hatrany izy hampamirapiratra ny teny nolalainy. Hay efa impiry impiry ny lehilahy fa nandalo fandidiana nampanahy indrindra ny fianakaviana fa tratrany
ihany ny fahanterana. Aiza ho aiza amin'izany isika betaraina itony? Tsy nampiala vehana azy ny
sakatsakana mety ho nitranga. Nampitamberina indray ny halalin'ilay tononkalo manao hoe:
Raha mbola misy tsiky
azonao asetra ny ronjon'ny ankaso
Nahoana indrindra, iky
no dia laniana foana ny vongan-dranomaso!
Raha mbola misy ihany
kintana mamiratra azonao banjinina,
nahoana no tomany
no andanianao ny alin'ny ririnina?
Raha mbola misy kalo
azonao hiraina anaty fahavaratra
nahoana no himalo
mahita vodilanitra mosarena taratra?
24 - 02 - 70
Tranga iray hafa avy amin'ny resaka fohy nataon'i Bessa indray ny fiarovana nataon'i Rado fony
mpanao hira mibarareoka i Bessa, nihira ilay "Ny hirako izao Ray be fitia"(fihirana FFPM lah.478)
Toa maneso manko ny mandre ilay feo ka nisy nitsikera tao amin'ny gazety "Fanasina", gazety
protestanta nivoaka isan-kerinandro nandritra ny repobilika voalohany (efa namaky ny sasantsasany tamin'izany aho fahakely). Ny protestanta manko miaro fatratra ny fomba fihira araka ny sol-fa (tandrefana aza) ka nanohina ny fony ilay zanaka mpitandrina toa naniratsira ny hiram-pivavahana. Avy tamin'ny fomba fitendrin'i Bessa ny harimÔnia no tena nahatonga azy hiaro ilay fomba fihira (samy zanaka mpitandrina koa moa ry zalahy). Tsy fantatro loatra satria tsy ampelatanako intsony io raharaha iray io, ka tsy haiko ny fomba niarovan'i Rado an'i Bessa. Ny tsapako avy hatrany fotsiny dia avy amin'ny fomba fihira zafindraony, saiky nofadiana am-piangonana (mbola tsy nanaiky loatra ny fifohazana manana ny hira mifanahatahaka amin'ireny ihany koa tamin'izany fotoana izany ireo fiangonana nipoiran'ny FJKM) manko ny hira maintimolaly fa izay tsy afaka ambavan'ny maro tamin'izany (toy ny Sambasamba Zanahary hira FFPM lah.79) ihany no tsy maintsy nampidirina fandrao mampalahelo ny maro an'isa. Ity resaka notsongaina tamin'ny resaky Bessa ity no tena ahazoana mitaratra ilay mahamalagasy azy satria nifanakaiky tamin'ny am-pon'ny maro an'isa, ambany ravinahitra, izay fiheviny izay.
Hitondra ny fanilo izahay ry Rado, Hasandratray ho avo ny hasoan'ilay teny maminao. Hokoloinay
tsy ho lefy mba tsy ho verivery foana ny hasasaranao.